iPartner ပြိုင်ပွဲ ဖိုင်နယ်
iPartner ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီ! မိတ်ဆွေကြီးတို့ အနေနဲ့လဲ FBSအတွက် ဖောက်သည်သစ်တွေကို ဆွဲဆောင်ရှာဖွေရင်းနဲ့ တော်တော်လေးကို ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရမှပါ. မကြာခင်မှာပဲ FBSရဲ့ပါတနာတွေထဲကမှ အတက်ကြွဆုံးပါတနာတွေရဲ့ နာမည်တွေကို သိခွင့်ရတော့မှာပါ. အမှတ်အများဆုံးရရှိအောင် ကြိုးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပါတနာတွေကတော့ ပထမဆုအဖြစ် Retina 4K display 3.1GHz 1 TiB 21.5 လက်မ iMac, ဒုတိယဆုအဖြစ်13လက်မMacBook 2.0GHz 256 Gb, နှင့်တတိယရရှိသူကတော့ iPhone7Plus 128Gbတိုံကို အသီးသီး ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ၃ခုမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာကိုတော့ တစ်သက်မမေ့နိုင်စေမယ့် ဆုဖြစ်တဲ့ (iPartnerပြိုင်ပွဲ၊ iPartner 7ပြိုင်ပွဲနှင့် လက်ရှိ iPartner7Plusပြိုင်ပွဲမှာ သုံးပွဲဆက်တိုက် အမှတ်အများဆုံးရရှိသူ) ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ FBSရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်!
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြိုင်ပွဲဖိုင်နယ်အကြောင်း အသေးစိတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိသူနဲ့ နာမည်ကို သိရဖို့ မျှဝေပေးမယ့် ဓာတ်ပုံ - ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ!